Tumira neemail Kwakanyanya Maitiro eNyika Yezororo | Martech Zone
Chitatu, November 9, 2011 Chitatu, October 29, 2014 Douglas Karr
Vatengi vanoda kushambadzira neemail. Muchokwadi, riini surveyed, vatengi vanotaura kuti email ndiyo imwe yenzira dzavanofarira dzekuwana kupihwa uye zvidzikiso kubva kumabhizinesi avanoshanda nawo. Mwaka wezororo hauzosiyana uye unofanirwa kuronga maererano. Kwayedza, chidimbu uye wedzera kuwanda kwemaemail ako mwaka wezororo uye unogona kutyaira rakanyanya bhizinesi!
Martech Zone uye Delivra waburitsa iyi infographic kuti ikubatsire kuronga yako email mwaka maererano, ichipa yedu email zvakanakisa maitiro yekutarisa, karenda pamitengo yakavhurika, uye dzimwe nzira dzekuyedza uye kupatsanura vatengi vako.
Tags: Kisimusiemail zvakanakisa maitiroemail zororo purogiramuEmail Marketingmazororo